घरेलु मैदानमा हुने सागमा क्रिकेटले जित्ने पक्का ! | | Neplays.com
घरेलु मैदानमा हुने सागमा क्रिकेटले जित्ने पक्का !
दक्षिण एशियाली खेलकुद सागमा नेपाली क्रिकेट टिमका लागि पदक जित्ने निकै उत्कृष्ट मौका रहेको छ । भारत र पाकिस्तानले सागमा सहभागिता नजनाउने भएपछि नेपाली टिमलाई घरेलु भूमीमा हुने प्रतियोगितामा कम्तिमा काश्य जित्ने सुनौलो अवसर रहेको छ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा सबै भन्दा बलियो टिम मानिने भारत र पाकिस्तान नआउने भएपछि श्रीलंका र बंगलादेश अब उपाधिको दावेदारका रुपमा हेरिएका छन । त्यसपछि यो क्षेत्रमा बलियो टिमका रुपमा नेपाल नै रहेको छ ।
माल्दिभ्स र भुटानको क्रिकेट अहिलेपनि निकै तल्लो स्तरमा हरेको छ । अब नेपालले खेल्ने खेलमा बंगलादेश र श्रीलंकासँग पराजित भएपनि बाँकी दुई टिमलाई हराएर सेमिफाइनलमा स्वत पुग्नेछ । त्यो भनेको काश्य जित्ने पक्का जस्तै हो । यदि समुहबाट सेमिफाइनलमा कमजोर टिम विपक्षी परेमा नेपालले काश्य भन्दा माथिको पदक पनि हात पार्न सक्नेछ । तर त्यसका लागि नेपाली टिमले हरेक खेलमा राम्रो भने खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै अवस्था महिला टिममा पनि रहेको छ । टिमले यसपटकको सागमा कुनै न कुनै पदक जित्ने पक्का जस्तै छ । पुरुष टिमको जस्तै इक्वेसन महिला टिममा पनि रहेको छ । स्वर्ण जित्ने लक्ष्य राखेको महिला टिमलाई त्यो हासिल गर्न बंगलादेश र श्रीलंकाको चुनौती पन्छ्याउनु पर्नेछ ।
सागमा क्रिकेट दोस्रो पटक समावेश गरिएको हो ।
त्यसमा पनि भारत र पाकिस्तानले सुरक्षा र राजनितीक मनमुटावका कारण सहभागिता नजनाउने बताएपछि अब घरेलु मैदानमा हुने सागमा पदक चुम्ने सुनौलो अवसर रहेको छ ।
आइसीसीको चुनावी प्रक्रिया तय गर्न बैठक बस्दै
रंगशाला निर्माणमा खटेका कामदारलाई रकम प्रदान
‘सर्वाधिक उमेरमा आईपीएल खेलेका तीन क्रिकेटर’
श्रीलंकन प्रिमियर लिग क्रिकेट ‘ट्राेल’ काे सिकार
चेन्नेईले आइपीएलकाे प्रशिक्षण अगष्ट १५ बाट सुरु गर्ने, मुम्बईपनि तयारीमा
एन्डरसनले करियरका बारेमा निर्णय गर्दै !